Saliidda CBD ee Finanka | Xalalka CBD ee ugu fiican 2020
Saliidda CBD ee finanka
System The Endocannabinoid
Maxaa keena finanka?
Sida Loo Isticmaalo Saliida CBD Finanka
Sidee buu Saliidda CBD u daweeyaa finanka?
Finanka waa mid ka mid ah xaaladaha maqaarka ee saameeya nolosha dhallinyaro badan, laakiin xitaa kuwa naga mid ah oo aan qaangaar ahayn mar dambe ayaan la yaabnaa kala go'a marmar.
Dhibaatooyinka maqaarka sida finanka ayaa nagu kalifaya inaan u isticmaalno walxaha kiimikada si aan isugu dayno una ciribtirno zits. Laakiin walxahan inta badan ma keenaan cuncun dheeraad ah maqaarka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira walax dabiici ah oo jawaab u noqon kara dhibaatadan maqaarka.
Cannabidiol ama CBD ayaa caan ku ah mid ka mid ah in ka badan boqol xeryood oo la yiraahdo cannabinoids oo ku jira dhirta Cannabis Sativa. Cannabidiol wuxuu caan ku yahay ka-hortagga walwalka, ka-hortagga welwelka, ka-hortagga bararka, iyo ka-hortagga xanuunka.
Si ka duwan sida loo yaqaan tetrahydrocannabinol ama THC, oo ah cannabinoid-ka firfircoon ee marijuana, cannabidiol ma laha saameyn nafsiyadeed, taas oo ah, waligeed kaa dhigi mayso mid sare, si kasta oo aad u qaadato.
Halkii, walaxdan la yaabka leh ayaa loo malaynayaa inay leedahay faa'iidooyin caafimaad oo ballaadhan, iyada oo ay ugu wacan tahay is -dhexgalka ay la leedahay nidaamka jirka oo aan la garanayn 30 sano ka hor.
Nidaamka endocannabinoid (ECS) waa nidaam calaamad u leh naasleyda, kaas oo nidaamiya shaqooyin kala duwan oo jirka ah, oo ay ku jiraan rabitaanka cuntada, xusuusta, xanuunka, niyadda, iyo qaar kaloo badan. Iyo wax kasta oo gacan ka geysta homeostasis ama dheelitirka caafimaadka. Jidhkeennu wuxuu abuuraa endocannabinoids, kuwaas oo ah dareemayaasha gudbiya farriimaha u dira soo -dhoweeyeyaasha jidhkeenna si ay tallaabo u qaadaan.
Si la yaab leh, phytocannabinoids -ka ku jira xashiishadda Sativa ee warshadda waxay la jaanqaadaa waxqabadka endocannabinoids. Cannabinoids sida cannabidiol ama calaamad cad CBD ayaa lala xiriiriyay faa'iidooyin caafimaad oo kala duwan waxaana laga yaabaa inay xal u tahay dadka qaba dhibaatooyinka maqaarka sida finanka.
Jidhkeennu wuxuu qariyaa walax saliid leh oo la yidhaahdo sebum iyada oo soo marta qanjidhada sebaceous ee maqaarka hoostiisa. Ujeedada sebum -ka ayaa ah in maqaarka maqaarkiisa la mariyo oo laga hortago inuu engego. Sebumkani wuxuu kor u qaadaa timaha timaha wuxuuna ka soo baxaa daloolada.
Laakiin marka ay weheliso sebum, timaha timuhu waxay kaloo daadiyaan unugyada maqaarka ee dhintay jirka. Markay badato sebum -ka iyo unugyada maqaarka, daloolada ayaa isku xirmi kara. Taasi waxay dhistaa bakteeriyada xad -dhaafka ah, taasoo keenta dhibco bararsan oo aan u naqaanno finan.
Sababaha keena inay tan dhacdo, waxaan ka heli karnaa:
Daloolada waxaa xiray unugyada maqaarka ee dhintay: Unugyada maqaarka ee dhintay oo aad u badan oo hal mar la sii daayo ayaa sababi kara in unugyo is-urursadaan iyo sebum-ku ay isku dhegaan oo ay xirmaan daloolada.
Sebum xad -dhaaf ah: Sepum -ka xad -dhaafka ahi wuxuu xannibi karaa daloolada, wuxuu madaxa ka dhigi karaa mid dufan leh, wuxuuna ku soo saaraa maqaarka saliid xad -dhaaf ah, taas oo u horseedi doonta finan iyo dhibco.
Bakteeriyada xad -dhaafka ah: Marka xannibaadda maqaarku dhacdo, bakteeriyada ku jirta maqaarka ayaa weynaan doonta, oo isku biiri doonta dufanka waxayna keenaysaa barar.
Hormoonnada xad -dhaafka ah: Testosterone -ku wuxuu kordhaa inta lagu jiro qaan -gaarnimada taasoo keenta in qanjidhada sebaceous ay weynaadaan oo soo saaraan sebum badan.
CBD Wajiga & Nadiifiyaha Finanka
Waxaa jira siyaabo badan oo saliidda CBD lagu geliyo jirkaaga oo aad u shaqeyso. si ay u gaadho shaqada. Hababka oo dhami waxay ka dhigayaan xaruntan inay la falgalaan soo -dhoweeyeyaasha jirkaaga si ay u soo saaraan natiijo, laakiin marka laga hadlayo finanka, maaddooyinka ayaa ah doorashada la doorbidayo.
Waxaa jira kareemooyin kala duwan, kareemooyin, serums, iyo balms oo ay ku jiraan xoogag kala duwan oo cannabidiol ah. Saliidda CBD waa mid aad loo daadin karo waxayna si fudud maqaarka ugu geli kartaa qanjidhada sebaceous. Mawduucyada CBD, gaar ahaan hemp-ka-soo-baxa ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican ee dadka la il-daran finanka maadaama saliidda abuurka hemp ay sidoo kale ku jirto asiidhyo amino oo muhiim ah.
Kaabsooshadu waa hab sahlan oo wax ku ool ah oo lagu qaadan karo saliidda CBD. Waxay ku yimaadaan xoogag kala duwan oo saameyntoodu waxay socotaa ilaa 8 saacadood.
Ubaxa uumiga ama e-dareeraha ayaa bixiya saamayn degdeg ah sababta oo ah uumigu wuxuu si toos ah u aadaa sambabada oo halkaas ayuu uga sii gudbaa dhiigga iyada oo la nuugo sambabada. Uumi -baxayaashu waxay kululeeyaan badeecada halkii ay ka gubi lahaayeen, sidaa darteed ma jiraan wax sun ah oo jidhkaaga soo geli doona.
Dhibcaha waxaa loo qaadaa si hoose. Waxaa lagu heli karaa xoogag kala duwan, hemp-kaliya terpene-infused waxayna ku yimaadaan dhadhan kala duwan.
Dadka laga yaabo inaysan jeclayn/u dulqaadan karin dhadhanka tincture saliidda CBD, CBD sidoo kale waxaa lagu heli karaa qaab cunto, cabitaan, iyo cunto fudud. Cuntooyinka la cuno ee CBD waxay ku siinayaan qiyaas qaadata ilaa 8 saacadood. Xitaa waxaad guriga ku samayn kartaa wax la cuno adiga oo adeegsanaya tinctures -ka.
Tallaabada CBD ee ECS ee maqaarka ayaa la yaab leh sida geedka ay ka timaaddo. Waxaa ka mid ah "falalka ka hortagga finanka" ee CBD, waxaan xusi karnaa:
CBD ayaa la sheegay inay horjoogsanayso ficilka lipogenic ee endocannabinoids anandamide iyo 2AG, oo lagu soo saaro qanjidhada sebaceous waxayna ku dhaqmaan soo -dhoweeyeyaasha CB2, iyagoo mas'uul ka ah soosaarka sebum -ka xad -dhaafka ah. CBD nidaamiyaa wax soo saarka sebum -ka.
Saliidda CBD waxay leedahay saameyn liddi ku ah bakteeriyada, waxayna baabi'in kartaa bakteeriyada ku xeeran goobta caabuqa.
Saamaynta ka-hortagga bararka ee saliidda CBD waxay ka hortagtaa wakiilada “pro-acne” inay kordhiyaan heerarka cytokine pro-inflammatory.
CBD ma ka caawisaa Nabarrada finanka?
Saliidda CBD ee la mariyey saliidda hemp waxay leedahay sifooyin bogsiinaya oo hagaajiya muuqaalka iyo xaaladda maqaarka haddii la isticmaalo laba jeer maalintii ugu yaraan saddex bilood.
CBD ma ka shaqeysaa finanka jirka?
Saliidda CBD ayaa la sheegay inay sidoo kale ka shaqeyso finanka jirka. Jeexitaanku wuxuu ku dhici karaa qoorta, garbaha, dhabarka, iyo xabadka maxaa yeelay aagaggaas waxaa ku jira qanjirro dufan badan marka loo eego jirka intiisa kale.
CBD waxay yareyn kartaa qashin -saarka sebum -ka kaas oo abuuraya xirmooyin keena zits. Waxa kale oo ay hoos u dhigtaa tirada bakteeriyada ku soo urura goobta caabuqa waxayna yaraysaa bararka la socda.
CBD ma ka caawin kartaa Dhibaatooyinka kale ee Maqaarka?
Maqaarka, oo ah xubinta ugu weyn ee jirka, waxaa ku jira nidaamka calaamadeynta moodeelka ECS. CBD ayaa la xaqiijiyay inay la falgasho. Waxyeellada bakteeriyada, antioxidant, anti-microbial, iyo saameynta caabuqa ee CBD waxay gacan ka geysataa dheelitirka caafimaadka waxayna gacan ka geysan kartaa yareynta/yareynta xaaladaha kale ee maqaarka sida cudurka psoriasis, dermatitis, iyo maqaarka qalalan iyo cuncunka.
In kasta oo cilmi -baaristu wali socoto, CBD waxaa la muujiyey inay leedahay awood weyn oo lagu daweeyo dhowr xaaladood oo maqaarka ah, oo ay ku jiraan finanka, iyadoo la yareynayo soo -saarka sebum -ka iyo bararka, iyo baabi'inta bakteeriyada
Ma jiro wakiil kale oo ka hortagga finanka oo isbarbar dhiga CBD marka la eego waxtarka. Intaas oo kaliya maahan laakiin cannabinoid -ku wuxuu muujiyey dulqaad aad u sarreeya bini -aadamka mana cuncuno maqaarka.
Xanuunka finanka iyo xaaladaha kale ee maqaarku waa inaanay nolosheena si xun u saamayn, laakiin markay bilaabaan inay saamayn ku yeeshaan caafimaadka dhimirka, waa waqtigii la raadin lahaa xal dabiici ah sida CBD.
Previouspost Previous:CBD, CORONA VIRUS IYO IMMUNITYNextpost Next:6 Waa inaad haysataa Alaabta Daryeelka Maqaarka ee CBD haddii aad ku nooshahay New York